अन्तरघात गर्ने कसैलाई छाडिन्न-अध्यक्ष ओली – HamroSamrachana
अन्तरघात गर्ने कसैलाई छाडिन्न-अध्यक्ष ओली
हाम्रो संरचना । २६ असार २०७४, सोमबार ०८:३५
असार २६, २०७४/ नेकपा एमालेका अध्यक्ष के.पी. ओलीले पार्टी भित्र अन्तर्घात भएका स्थानमा नेतालाई आफैं सात दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिनु भएको छ । ओलीले‘गुटबन्दी गर्दै हिँड्नेलाई छाडिन्न, यदि कसैले गल्ती गरेको छ भने एक साताको म्याद हुन्छ । कसैले एक साताभित्र म बाट यी-यी कमजोरी भयो भनेर लिखित प्रस्टीकरण दिन्छ भने क्षमा दिइन्छ । होइन छानबिन गरेर गल्ती गरेको पाइयो भने कुनै छुट हुन्न । कसैलाई छाडिन्न । सबै भ्रममुक्त भए हुन्छ ।’
सभालाई सम्बोधन गर्न आइतबार गृहजिल्ला झापा पुगेर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले ‘पार्टीभित्र अन्तर्घात’ भएको विश्लेषण सुनाउदै ” विशेष गरी झापाका गौरादह, बुद्धशान्ति र मेचीनगर तीनवटा स्थानीय तहमा एमालेको हार एमालेका लागी अप्रत्याशित भएको छ ।”
‘गौरादहजस्तो ठाउँमा एमालेले मेयर हार्ने कुरा सोच्न सकिन्छ ? तर हारियो, किन हारियो भन्दा हाम्रैले हराए,’ निर्वाचित नेता र अधिकांश अगुवा कार्यकर्तामाझ ओलीले प्रश्न गरे, ‘बुधबारे भनेको उहिलेदेखि नै हाम्रो किल्ला हो । २०४९ र २०५४ मा हामीले शतप्रतिशत जितेको होइन ? त्यस्तो ठाउँमा जिल्ला अध्यक्षजस्तो प्रतिष्ठित नेता एउटा गाउँपालिकामा हार्नुभो, त्यहाँ हार्ने ठाउँ हो ? नचाहिने खालका कुण्ठाहरू बोकेर गुटबन्दी गर्दै हिँड्नेलाई छाडिन्न । पार्टी उम्मेदवार हराउनेहरू एमाले होइनन्, तिनीहरूको यो पार्टीमा स्थान छैन ।’
‘एमालेलाई जनताले रुचाएका छन् र हामी पहिलो पार्टी भएका छौं तर पनि केही स्थानमा आन्तरिक कमी-कमजोरीले परिणाम राम्रो आउन सकेन,’ एमाले निर्वाचन परिचालन तथा अनुगमन समितिका संयोजक समेत रहेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले ‘हामी चुनावको समीक्षा गरिरहेका छौ, पार्टीका उम्मेदवारलाई कमजोर बनाउनेलाई कारबाही हुन्छ ।’
निर्वाचनको मुख्य कमान्ड सम्हाल्नु भएका पोखरेलका अनुसार एमालेले दुवै चरणको निर्वाचनमा ५० देखि ६० प्रतिशत स्थान जित्ने आकलन गरेको थियो । पहिलो पार्टी बन्ने त ढुक्क नै थियो, दोस्रो पार्टीसँगको अन्तर पनि धेरै नै हुने आकलन थियो । तर परिणाम त्यसअनुसार आएन । हालसम्मको परिणामअनुसार ४५ प्रतिशत स्थानमा मात्र एमालेले प्रमुख जित्यो । ‘उम्मेदवारी चयनमा ढिलाइ र निर्वाचन परिचालनमा सबै ठाउँमा उत्तिकै ध्यान दिन नसक्दा सोचेअनुसारको परिणाम आएन,’ ‘कतिपय ठाउँमा सत्ताको दुरुपयोग गरेर चुनाव प्रभावित पार्ने काम पनि भयो, त्यसका कारण केही स्थानमा पछि परियो ।’
झापामा एमालेका जिल्ला अध्यक्ष चिन्तन पाठक नै गाउँपालिकाको प्रमुखमा हारे । विराटनगर महानगरको मेयरमा जिल्ला अध्यक्ष विनोद ढकाल पराजित भए । झापामा सधैं चुनाव जित्दै आएको हालको क्षेत्र नम्बर ६ मा पर्ने गौरादह र गौरीगन्ज दुवै स्थानमा एमालेले हार्‍यो । गौरादहमा झापा जिल्ला सचिव मदन अधिकारी पराजित भए । जिल्लाका अन्य स्थानमा विजयी हुँदा पनि केही अध्यक्षहरू नै पराजित भए ।
पाँचथरको फिदिममा अध्यक्ष राजकुमार भण्डारी पराजित भए । बर्दियाका अध्यक्ष हरिप्रसाद ज्ञवाली गुलरिया नगरपालिकामा पराजित भए । प्यूठानका तुलसीराम शर्मा, सिन्धुपाल्चोक झम्क नेपाल इन्द्रावती गाउँपालिका, रुकुमका विमल पुन र ललितपुरमा हरिकृष्ण व्यञ्जनकार अध्यक्ष भएर पनि पराजित भए । विगतमा राम्रो नतिजा ल्याएको बाजुरा, अछाम जस्ता जिल्लामा एमालेको राम्रो परिणाम आएन ।
नवलपरासीको सुनवल, रूपन्देहीको देवदह, कपिलवस्तुको बाणगंगा, भोजपुरको षडानन्दलगायत स्थानमा उप-प्रमुख फराकिलो अन्तरमा जित्दा प्रमुख चाहि हारेका छन् । झापाकै कमल गाउँपालिकामा जिते पनि बराबरी मतमा चिट्ठा तान्नुपर्‍यो ।
प्रदेश १ को मोरङ र सुनसरीमा पनि एमालेको बलियो उपस्थिति रहेन । समग्रमा पहिलो भए पनि महत्त्वपूर्ण स्थानको हारले आगामी चुनावका नतिजामा तलमाथि हुने सक्ने बुझाइ एमालेको छ । त्यसैले हालको चुनावी परिणामलाई सही समीक्षा गरेर सुधार्नु जरुरी रहेको नेताहरूले बताएका छन् । त्यसका लागि तल्लो तहबाटै छिट्टै समीक्षा प्रतिवेदन आउने र त्यसका आधारमा केन्द्रमा थप समीक्षा गरिने महासचिव पोखरेलले जानकारी दिए ।
एमाले प्रदेश ४ बाहेक चुनाव भएका अन्य पाँचवटा प्रदेशमा प्रमुख पार्टी बनेको छ । पहिलो चरणको चुनावमा एमालेले १ सय २५ स्थानमा प्रमुख जित्दा १ सय ३६ स्थानमा उपप्रमुख जितेको थियो । त्यस्तै दोस्रो चरणमा मतगणना जारी रहेको ४ स्थानबाहेक १ सय ४८ सिट प्रमुख जितिसक्दा १ सय ७२ सिट उपप्रमुखमा जितेको छ । यो अवस्था रहँदारहँदै पनि केही स्थानको हार बढी महत्त्वपूर्ण रहेको धारणा नेताहरूको छ । पार्टीका नेताहरू एकढिक्का भएको भाषण गरिरहे पनि एमालेभित्र नेताहरूको गुटबन्दी अझै सकिएको छैन । एउटै गुटभित्र पनि नेताहरूको टकराव ज्यादा छ ।
उम्मेदवार चयन गर्दा पनि त्यसले प्रभाव पारेको मूल्यांकन छ । उम्मेदवार बनिसकेपछि एउट पक्षले अर्को पक्षलाई खुलेर नसघाउँदा पनि यस्तो परिणाम आएको विश्लेषण एमालेभित्र हुन थालेको छ । एमालेले यस पटक टिकट वितरणमा तल्ला कमिटीलाई नै बढी जिम्मेवार बनाएको थियो । महानगर र उप-महानगरको टिकट मात्र केन्द्रबाट टुंगो लगाएको हो । अन्य स्थानमा तलबाटै टुंग्याएका नामलाई माथिबाट अनुमोदन गरेको थियो । तर त्यति हुँदा पनि केही समस्या देखिएकाले गम्भीर समीक्षा हुने एमालेले जनाएको छ ।
कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा कर्फ्यू : एक जनाको मृत्यु
काठमाण्डौंका बिभिन्न् अस्पतालमा कार्यरत १४ जना बिदेशी नक्कली डाक्टर सहित १७ जना पक्राउ